UKUPASA KWEKHITSHI NGEMIBONO YEWINDOWS - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Ukupasa kweKhitshi ngeMibono yeWindows
Wamkelekile kwigalari yethu yokupasa ikhitshi lokuyila ngeengcinga zefestile kubandakanya uyilo olwahlukeneyo. Ukudlula ekhitshini ngefestile kufakwe ngokwesiko ngaphakathi ezindlini, ukuhambisa ngokulula okanye ukuhambisa ukutya okusuka ekhitshini ukuya kwindawo yokutyela.
Ezi zihlala zifumaneka kwiindawo zokutyela, zivumela abasebenzi base khitshini ukuba bathumele ngqo ii-odolo zokutya kwikhawuntara okanye iiseva zokutya ngaphandle kokushiya ikhitshi. Yisisombululo esilula sokuyila esibandakanya ukwenza umngxuma ngodonga okanye ucango nokongeza ifestile encinci enkulu ngokwaneleyo ukuba ukutya nezitya zidlule.
Izicelo zangoku zokupheka kwekhitshi ngefestile kubandakanya ukudibanisa ikhitshi kwiindawo zangaphandle. Ayivumeli kuphela umoya owongezelelekileyo kunye nokukhanya ekhitshini, kodwa le ikwayimbono egqibeleleyo ukuba awunasithuba sebha yangaphandle, kodwa ungathanda ukukuhambisa ngokufanelekileyo ukutya neziselo kwiyadi yakho yangasemva okanye kwiveranda.
Kumfanekiso ongentla kwekhitshi le-khodiyoni elidlula ngefestile elidibanisa ngokuthe ngqo ikhitshi yanamhlanje kwindawo yedama lendlu. Ifestile yekodiyoni ihlanganiswe kwelinye icala lesakhelo, ivumela ukuvulwa kakhulu kwefestile.
Iindidi zokuPasa ngeWindows
Ukudlula ekhitshini nge Window ukuya ngaphandle kwePatio
I-Galley Kitchen enokudlula kwiPatio
Ikhitshi elenziwe ngo-U elinokudlula kwiWindows
Ikhitshi elinokudlula okukhulu ngefestile
Ipeninsula yasekhitshini enefestile eya kwigumbi lokutyela
Ipeninsula yasekhitshini ngePasa ngeFestile ukuya kwiBhari yasekuseni
Ukutyibilika ukuDlula ngeFestile
Igumbi lokutyela elinokuGqitha ngefestile ukuya ekhitshini
Ikhitshi elinokuDlula okuncinci ngeWindows
Ikhitshi elinokuDlula ngokuDlula kwiWindows
Igumbi lokutyela elinokudlula ngefestile
Ikhitshi eliValiweyo lokuVala ngeFestile yokuDlula
Ibha yasekhaya ngokudlula ngeWindows
Ikhitshi laseRustic elineGaraji yoMnyango weGaraji ngeFestile
Dlula kwiPeninsula yasekhitshini
Ikhitshi NgeArched Pass nge Window
Iindidi ezahlukeneyo zeefestile zinokusetyenziswa njengekhitshi lokudlula ngefestile. Uhlobo olufanelekileyo luya kuxhomekeka kuyilo lwendawo, kunye nendawo ekhoyo eludongeni lofakelo lwefestile, uhlahlo-lwabiwo mali kunye nokhetho lomntu. Nantsi eyona ndawo idlulayo kwiifestile ezisetyenzisiweyo:
Window Isisitho - Olu lukhetho olukhulu ikakhulu kwabo bakumazwe akweleenjiko okanye naphina apho kukho imvula engapheliyo kunye nemvula. Ezi zifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo kunye noyilo. Iifestile ezinkulu, zesitayile somngxunya sangoku ziya kuba netekhnoloji ye-hydraulic ukuze ukwazi ukuphakamisa ngokulula iwindow evulekileyo okanye uvale njengoko kufuneka. Xa ivuliwe, iwindow evuliweyo ikwasebenza njengophahla.
uyicoca njani iringi ekhaya
Swing Up Window -Ukujikeleza kunye neefestile ze-awning zihlala zididekile kuba bobabini bejijela phezulu. Umahluko ophambili kukuba, i-awning windows ujika NGAPHANDLE, ngelixa ujika iifestile ujika NGAPHAKATHI. Olu khetho lulungile ukuba awunazo iishelufa ezingaphezulu, izibane okanye iikhabhathi eziya kuthintela indlela yefestile. Olu lukhetho lwembono lwakho lokuvula iifestile ngoku luhlobo lwecasement enesill, apho kunganzima ukufaka iwindows.
Ifestile epokothweni -Ukuba awufuni kuvuleke iifestile zokuthintela nantoni na ngaphakathi okanye ngaphandle, okanye ukuba umfutshane nje esithubeni, iwindow epokothweni inokuba lolona khetho lufanelekileyo. Kulula ukuyifaka kwi-drywall, kwaye uyilo olunjalo luvumela iifestile zakho ukuba zityibilike ngaphakathi kwipokotho efihliweyo phakathi kweendonga, kuvulwe enkulu kunye nokungathinteleki.
Umnyango wegaraji -Ungasebenzisa umkhondo okhoyo womnyango wegaraji ukuyiguqula ibe yimpumelelo-ngefestile ngokunjalo! Uncinci wezakhono ze-DIY ziya kufuneka ukugqiba oku, kodwa kuyenzeka kakhulu!
Izambatho zelizwe zeendwendwe zomtshato
Ifestile yeAccordion - Olu hlobo lwefestile olutyibilikayo kwelinye icala okanye kumacala amabini esakhelo sefestile. Iifestile zeAccordion zilunge ngokukodwa ukuba unendawo enkulu okanye ebanzi apho ufuna ukudlula ngefestile. Oku kuhlala kulukhetho kuvulo olukhulu.
Xa ujonga ikhitshi lokudlula kwimibono yeefestile kungcono ukuba uqwalasele ubeko lwasekhaya ukumisela isitayile sakho. Ungazama ukusebenzisa Isoftware yoyilo ekhitshini ukufaka iinkcukacha zakho ngqo kwaye ubone imibono yakho.
Lo ngumzekelo omhle woyilo lwekhitshi kunye nekhodiyasi edlula ngefestile. Nangona kunjalo, le yona isonga iifestile kumacala amabini esakhelo sefestile, kwaye ine-silhouette ethe kratya yokutshatisa isitayile sasekoloniyali saseSpain sasekhitshini.
Lo mzekelo ubonakalisa ikhitshi lekhodiyoni elidlula ngaphandle. Kwicala lokuvulwa kwefestile, kufakwe ibhaji yentsimbi eyenziwe ngentsimbi yaza yalungiswa ngee-barstools zommandla ongaphandle webar.
Nokuba uvaliwe, usenakho ukusebenzisa ibha yokuhombisa njengendawo encinci yokutyela okanye ukutya / isitishi sokulungiselela.
Eli khitshi lidlula ngefestile libanzi kakhulu, ngoko ke uhlobo lwefestile lwalusetyenziswa. Oku kukuvumela ukuba ubusebenzise ngokupheleleyo ububanzi bovulo.
Ububanzi befestile encinci bunokusebenzisa ukudlula kwekodiyoni kwiifestile. Kuba le festile ibifakelwe isinki, ikhonkiyoni isonga ngaphandle ukuze ingabethi faucet. Jonga isikhokelo sethu ku ubungakanani obuqhelekileyo bewindow kweli phepha.
Olu luluvo oluvela ngaphandle, lubonisa ukuba lusonga kanjani ngaphandle kwilitye lenyengane lemabhile ngaphandle kwewindow.
Umdlalo ophezulu kakhulu ococekileyo kunye nobuhle obuncinci bekhitshi, ukucwangciswa okuncinci kwakusetyenziselwa eli khitshi lokudlula ngefestile. Inomphetho omhlophe osongiweyo wokutshatisa iikhabhathi ezimhlophe zekhitshi.
Le khodiyoni idlula ngefestile ngokudibanisa ngokufanelekileyo ikhitshi kwipatiyo yangaphandle ngokuvula okuhambelana nobungakanani befestile yendlu. Olu lukhetho olukhulu kwabo bangathanda ukonwabisa kwaye bakhonze ukutya kwipatiyo, kodwa bangabi nophahla okanye isigqumathelo sokukhusela eyona ndawo yebarbecue yangaphandle.
Ipatio yangasemva kunye nokudlula ngefestile ikwanceda ukubandakanya umntu ophekayo kunye nokulungiselela ukutya kwinyathelo.
Ukuba awukuthandi ukuthintelwa kweefestile ezisongiweyo ezivela kwifestile yekodiyoni, isigubungelo sefestile okanye awunakho ukusebenzisa iwindow ejikelezayo kwisithuba sakho, usenakho nokujonga isilayidi esiphakamileyo njengoko sisetyenziswa kule khitshi yegali. Oku kukuvumela ukuba usinike ukufikelela ngokukuko phakathi kwendawo yangaphandle kunye nekhitshi, ivumela ukuvulwa kwefestile ngokubanzi, kodwa kuncame kancinci kubude bokuvula.
Dlula kwiifestile zisebenza ngokufanayo kwiikhitshi ezimile njengo-U njengoko zisenza ngayo nayiphi na igali okanye ikhitshi emile njengo-L. Lo mzekelo unefestile elula, emhlophe equlunqwe ngefestile ehambelana nesikimu sombala wekhitshi.
Ukudlula kwiifestile ngokwesiko bekusetyenziswa ngaphakathi ezindlini, kwaye akukho mfuneko yokuba ifestile yokwenyani isebenze. Lo mzekelo ubonakalisa ukudlula okukhulu ngokuvula ukusuka ekhitshini ukuya kwindawo yokutyela.
Ikhitshi kunye namagumbi okutyela ziindawo ezahlukileyo, kodwa ukuvulwa okukhulu kokuphuma ngefestile kunceda ukudibanisa indawo ezimbini zendlu. Ukuvulwa okukhulu kunceda ekwenzeni ikhitshi lizive lingenanto okanye lincinci, kwaye ikwanceda ngokufanelekileyo ukuhambisa ukutya kunye nezitya ukusuka ekhitshini ukuya ekutyeni kwaye kungenjalo.
Kwabo banqwenela ukususa udonga ukuvula isithuba kukho iikhitshi ezineekholamu ezo zisabonelela ngenkxaso yesilingi ngaphandle kokongeza iipali ezibiza ngaphezulu.
Into eyahlukileyo kolu luyilo kukusetyenziswa ngobuchule kweengcango zekhabhinethi yaseFrance ezibekwe kumacala omabini okupasa okukhulu ngokuvula, okwenza ukuba kubonakale ngathi ziifestile ezivulekileyo zeefestile endaweni yokugcina / ukubonisa iikhabhathi.
Le bha yesidlo sakusasa ilula kwaye iyasebenza ekusebenziseni iifestile. Kwenziwe udonga olukhulu eludongeni olomileyo, kwaza kwafakwa isileyiti segranite njengongqameko oluvulekileyo ukuze ibe yindawo yokutya kwasekuseni esebenzayo.
Indawo ngumceli mngeni wokwenyani kwizakhiwo zokuhlala okanye iiflethi ezinje ngalo mzekelo. Ikhitshi elincinci likwikona eyahlukileyo evalelweyo yeyunithi, kwaye kuba ayifumani kukhanya kwelanga ngenxa yendawo ekuyo, ihlala ikhangeleka imnyama kwaye ixineneyo.
Ngokwenza ukuvulwa okukhulu kudonga olomileyo, sivumela ukukhanya kwendalo ukuba kungene ekhitshini elincinci. Umda owongeziweyo wegranite wongeza umsebenzi ngakumbi ekuvuleni ngokusebenzisa ibha yesidlo sakusasa.
Kuxhomekeke kulwakhiwo, ulwakhiwo kunye nokubekwa kwezithintelo, i-awning okanye i-accordion windows isenokungasebenzi. Njengalo mzekelo, isilayidi esetyenzisiweyo sasetyenziswa endaweni ye-awning okanye enye into iintlobo zeefestile .
Ukusetyenziswa kwesiko lokudlula kwiifestile kukudibanisa ikhitshi kwindawo yokutyela, nokuba yindawo yokuhlala okanye yokutyela. Lo mzekelo ubonakalisa ukuvulwa okuncinci okusetyenziselwa ukugqitha ngefestile ukuqhagamshela ikhitshi elincinci kwindawo yokutyela esemthethweni.
Oku kudlula ngefestile ukusuka ekhitshini ukuya kwigumbi lokutyela kuvula indawo ekhitshini kwaye kubonelela ngendawo yokutya. Ngokwenza ukuvulwa okukhulu kudonga olomileyo kunye nokwandisa i-countertop ngaphaya kokuvula, kwenziwa ibha encinci yesidlo sakusasa, ukongeza ukudibanisa ikhitshi kwindawo yokutyela.
Kulo mzekelo, ibha yokutya isidlo sakusasa ephezulu yokuphakama ibha yokufakelwa ukudibanisa ikhitshi kwindawo encinci / kwigumbi lesidlo sakusasa.
Le yindlela ejongeka ngayo ngaphakathi kwindawo yasekhitshini. Kukho ikhawuntara emise okwe-U esebenzisa ikhabhathi emhlophe kunye nemiphezulu yeetafile zegranite ezimnyama. I-countertop inokuphakama okufanayo nokuvula, ngoko akudingeki ukuba ungeze okongeziweyo okongeziweyo okanye izinto zamatye njengoko ufuna ukuba ufuna ukuphakama kwe-bar-height.
Ngamanye amaxesha, kufuneka senze ngezinto esele zikho-iwindow yesiqhelo eshukumayo isetyenzisiwe kulo mzekelo ukudibanisa ikhitshi kwipatiyo yangaphandle.
iikhabhathi zeekhitshi zasekhitshini
Ukulandela iinkcukacha ezizodwa zokwakha eluphahleni lwale ndlu, ikhitshi lisebenzisa ukuvulwa okungqukuva okwahlukileyo njengokudlula ngefestile ukuze ihambelane nomxholo wonke kunye nolwakhiwo lwesakhiwo.
Kungenxa yokuba eli gumbi lokutyela lifakwe ngaphakathi, ezi ndlela zimbini zidlulayo ngeefestile zokungena kwigumbi lokutyela zinceda ukuba indawo izive inganxibanga kwaye ijongeka ngathi ikhanya ngakumbi kwaye iyamema.
Ukuba ufumanisa ukuba ikhitshi ebiyelweyo iphazamisekile kancinci xa kufikwa ekukhonzeni ukutya kunye nokonwabisa iindwendwe, isisombululo esinye esilula esingabandakanyi ukuthoba iindonga, kukongeza ukugqitha ngefestile.
Eli khitshi lincinci longeze ukuvulwa okukhulu kwefestile ekuvumela ukuba ubone ikhitshi kwaye ubone ekhitshini, ngelixa likuvumela ukuba unikezele ngokutya ngokuvulekileyo okukhulu.
Enye indlela yokwenza ukuba ipasile yakho ivuleke isebenze ngakumbi kukongeza ibala okanye indawo yokubala apho ungabeka khona ukutya neziselo. Thatha enye imayile kwaye usebenzise izinto ezizinzileyo, ezinje ngamatye endalo ukwenza ukuba usebenze ngakumbi kwaye ubukeke. Ubungqingili kulo mzekelo bandiselwe ngaphandle ukubonelela ngendawo yedolo ngakumbi.
Iimpawu zokwakha ze-Upcycled ngokwenene zinomtsalane wazo. Ngaphandle kokonga kwimathiriyeli nakwizixhobo zehardware, ukwanceda ukunciphisa inkunkuma eveliswe ngexesha lolungiso lwakho. Lo mzekelo ubonisa ucango lwegaraji eliguqulwe laba lupase ngefestile.
Le festile ivula uyilo lwepatio ebiyelweyo, apho unokufumana khona ibhentshi ejingayo yomthi kunye nezihlalo ezibini zebar ezibekwe phambi kwendlela yokudlula ehambelana nomtsalane wendawo yonke.
Xa uyila iikhitshi, kuhlala kukho ukhetho olunzima ekufuneka ulwenzile: ukuba nendawo yokugcina ngakumbi ngokuchasene nokukhanya kwendalo okungakumbi. Ukuba sinokufumana okona kulungileyo kuwo omabini la mazwe, okanye ubuncinci ukulingana phakathi kwezi zimbini, kuya kuba yinyani!
Eli khitshi langoku ngumzekelo woku. Ngelixa ukugcinwa kwentloko kuhlala kuhlatshelwa indawo ethe kratya ngefestile, eli khitshi ligcina iseti epheleleyo yeekhabhathi ezingaphezulu ngokususa ikhawuntala yekhitshi kwiifestile zeglasi eziphakamileyo, kunye nokumisa iikhabhathi ezingaphezulu ngenkxaso yeposi yentsimbi. Oku kwenza ukuba ikhitshi lakho lasekhitshini liphindwe kabini njengepeninsula counter ngokunjalo.
Ukuba unesithuba esincinci kuphela ekhitshini, eyona ndlela ilungileyo kukuyigcina ivulekile ukuze ingaziva okanye ijongeke ngaphakathi. Abanye bakhetha ukwahlula-hlula kumakhaya abo, kodwa oko akuthethi ukuba ufuna iindonga phakathi.
Lo mzekelo uneempawu ze- Ikhitshi elinendawo yokubala usingasiqithi Ukwahlula indawo kwigumbi lokuhlala. Uyilo ludala ipasile enkulu ngokuvula phakathi kwendawo yekhitshi kunye nendawo yokuhlala kunye nendawo yokutyela.
Xa usebenza nezakhiwo esele zikho okanye izindlu, eyona ndlela ifanelekileyo xa ufaka iifestile ezintsha kunye nokuvuleka kukulandela isitayile sokuqala sokwakha, kangangoko kunokwenzeka.
Lo mzekelo wezihlangu iingcango zesitayile saseFrance kunye neefestile ezineefestile zearom. Ukugcina umxholo kunye nesitayile sokwakha sokuqala, ukugqitha ngefestile kukwafaka i-arch transom engaphezulu kwayo ukuze ithelekise zonke iifestile. Ndwendwela eli khonkco ukuze ubone ezinye izimvo zegumbi lokutyela.
indlela echanekileyo yokunxiba amakhonkco akho omtshato
amalokhwe amfusa kunye namhlophe amhlophe
tadashi umama womolokazana unxiba
Isipho seminyaka eli-15 somtshato